भारतीय चर्चित मिडियाले गर्यो नेपाली नायिकाको चर्चा, तर शेयर गर्यो उल्टो तस्बिर – Sanchar Patrika
भारतीय चर्चित मिडियाले गर्यो नेपाली नायिकाको चर्चा, तर शेयर गर्यो उल्टो तस्बिर
July 22, 2020 232
भारतको चर्चित मिडिया एबीपी न्यूजले नेपालका चर्चित पाँच हिरोइन भन्दै समाचार छापेको छ । तर उसले हिरोइन नचिनेर उल्टो तस्बिर छापेको छ । जहाँ प्रियंका कार्कीलाई केकी अधिकारी तस्वीरसहित भन्दै समाचार प्रकाशन गरेको देख्न सकिन्छ ।
भारतको राष्ट्रिय स्तरको मिडियाले गरेको यस्तो गल्तीका बारेमा केहि समयदेखि चर्चा चलिरहेको छ । एबीपी न्यूजले प्रकाशन गरेको समाचारमा नेपाली हिरोइनहरु निकै सुन्दर भएको उल्लेख गर्दै ५ जना हिरोइनको चर्चासहित ५ तस्वीर शेयर गरेको छ। जसमा ३ जना हिरोइनको मात्र फोटो सही भने बाँकी २ जनाको तस्वीरमा गल्ति गरेको छ ।
एक तस्वीरमा सृष्टि श्रेष्ठ भनेर पूर्व मिस नेपाल प्रिती सिटौलाको तस्वीर पोस्ट गरेको छ भने अर्कोमा केकी अधिकारी भनेर नायिका प्रियंका कार्कीको तस्वीर पोस्ट गरेको छ। बाँकी ३ जना साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह, जसिता गुरुङ र नम्रता श्रेष्ठको तस्वीर भने सही रूपमा शेयर गरेको छ ।
Prevकहिले आउँछ एसईईको नतिजा ?
Nextआजबाट लकडाउन अन्त्य : के-के गर्न पाइन्छ ? के-के पाइँदैन ?
पढ्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि पढ्न मन नै नलाग्ने : यस्तो छ यो समस्याको समाधान